Madaxwayanaha DDSI Oo Xalay Kasoo Jeediyay Khudbad Dheeli Tiran Xafladdii Loogu Dabaal Dagayay Dhagax Dhigii Jaamacada Qabrihadar - Cakaara News
Madaxwayanaha DDSI Oo Xalay Kasoo Jeediyay Khudbad Dheeli Tiran Xafladdii Loogu Dabaal Dagayay Dhagax Dhigii Jaamacada Qabrihadar
Jigjiga(CN) Isniin.13.2015, Sidaad wararkagayii hore kula socoteen waxaa xalay ka dhacay hoolka shirarka ee SMCX xaflada balaadhan oo loogu dabaal dagayay dhagax dhigii Jaamacada Qabridahar.
Xafladaasi oo ay xukuumadu u soo diyaarisay si meeqam sare ah ayaa waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiinta xukuumada DDSI ugu saraysa oo uu ka mid yahay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka madaxtooyada DDSI marwo Sucaad Axamed Faarax, golaha capinetka DDSI golaha wasiirada, shaqaalaha dawlada, odayaasha, garaadada culimo awdiinta, qurba joog kooxaha fanka iyo suugaanka DDSI iyo waliba marti sharaf kale.
Xafladaasi oo ay ujeedeedu ahayd mid qaybaha kala duwan ee bulshada xisbiga iyo xukuumaduba ay ku taageerayaan mashaariicaha waawayne ee horumarineed ee qorshaha GTP2 gaar ahaan dhagax dhigii jaamacada qabrihadar iyo in waliba loo mahad celiyo gudigii qaban qaabada xafladdii dhagax dhiga jaamacada Qabridahar.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa uu xafladaasi ka soo jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay wuxuuna, ugu horayntii ka warbixiyay ahmiyada ay u leedahay deegaankeena dalkeena iyo guud ahaanba geeska Africa. Sidoo kale waxa uu tilmaamay baahida loo qabay jaamacadan 2 aad in deegaankeena laga hirgaliyo iyo dadaaladii ay xukuumada iyo dawlada dhexeba u martay hirgalinta jaamacada qabrihadar iyo guud ahaanba mashaariicaha horumarineed ee qorshaha GTP2. Taasi oo uu sheegay madaxwaynuhu in ay tahay helitaanka xuquuqaha dastuuriga ah ee ay deegaanku xaqa u leeyihiin.
Wuxuuna, madaxwaynuhu tilmaamay in markii ay golaha capintka DDSI daraasaad ku sameeyeen khariirad ahaana la odorasay ay xukuumada DDSI go’aamiyeen in jaamacadan 2aad laga hirgaliyo magaalada qabridahaar isaga oo madaxwaynuhu u mahad celiyay gudigii qaban qaabada xafladii dhagax dhiga jaamacada qabridahar sidii quruxda badnayd ee ay u diyaariyeen.
Dhinaca doorashooyinka mar uu madaxwaynuhu ka hadlayay, ayaa waxa uu sheegay in xukuumada DDSI xisbiga iyo shacabkuba si meeqaam sare ah ugu diyaar garoobeen doorashoyinka ka dhici doona dalkeena bisha fooda inagu soo haysa. isaga oo madaxwaynuhu sii wada hadalkiisa ayaa waxa uu sheegay in shacabka lagu kasban karo oo kaliya waxqabada iyo ka jawaabida baahiyahooda aas aasiga ah.
Mar uu madaxwaynuhu ka hadlayay dhinaca nabadgalyada deegaanka ayaa waxa uu sheegay in guud ahaanba deegaanka ayna ka jirin wax nabadgalyo darno ah amaanka deegaankuna yahay mid buuxa taasi oo ay keeneen shacabka deegaanka oo ah shacab u bislaatay ilaalinta ahmiyada ay leedahay nabadgalyada isku duubnimada shacabka xukuumada xisbiga iyo guud ahaanba haayadaha aminga deegaanka iyo kuwa dalkaba.
Sheikh Nadiir Sayid Nuur oo ah gudoomiyaha maxkamada arimaha shareecada DDSI oo ka hadlay xafladaasi ayaa ka warbixiyay ahmiyada ay leedahay jaamacada qabrihadar ugu mahad celiayay dadaalada ay xukuuamda DDSI iyo dawlada faderaalkuba ku hirgalinayaan mashaariicaha waawayn ee horumarineed.
Sheikh Nadiir mar uu ka hadlayay dhinaca nabadgalyada ayaa waxa uu sheegay in ay diinta islaamku dahay diin nabadgalyo oo naxariisbadan balse ay baryahan banbe soo baxeen kooxo wada dhaqamo xun xun oo hadana islaam sheeganayo oo ka dhaq dhaqaaqa wadamada qaar oo ay ka mid yihiin kooxda alqushaash ee nafla caaridnimada ku galaafanaysa shacab masaakiin ah oo aan waxba dhimin loona baahan yahay in kuwaasi laga sifeeyo diinta islaamka oo iyaga lala jahaatano
Xafladaasi ayaa intii ay socotay waxay kooxaha fanka iyo suugaanka DDSI ku soo bandhigeen hoose iyo dhaantooyin ay ku sheegayaan ahmiyada ay leedahay jaamacadan 2 aad ee laga hirgalinayo qabrihadar taasi oo ay masuuliyiinta oo uu ka mid yahay madaxwaynaha DDSI habeen kii xalay jiibinta ciyaarta dhaantada cagta laysla helay.